Dadka xanuunada isku qora oo tiradoodu soo kordheyso - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Hasse Holmberg/Scanpix.
Dadka xanuunada isku qora oo tiradoodu soo kordheyso
La daabacay fredag 24 januari 2014 kl 10.06
Ilaa sannadkii 2010 waxaa si joogto u soo kordhayey tirada dadka isku qora xanuunada ama guriga u jooga xanuun awgiis. Sannad qura gudahiis waxay dadka qaatay lacagta bukaanka ka soo kordheen 150000 qof oo gaareen 170000 oo qof, sida ay soo werisey idaacadda telefishanka ee SVT. Taasina waxay la micne tahay in uu aad u kordhay kharashka ay Hay’adda caymiska bulshadu ku lacagaha bukaanka.
- Waxaa muuqda koror, waana wax laga welwelo xataa haddii ay dadka jirrooyinka isku qora waqtiga gaaban soo badanayaan mustaqbalka. Waana heer ka duwan heerkii ay ahayd markii ay ugu xumayd. Waxaase in dhab ah looga fekeraa, ayuu yiri wasiirka caymiska bulshada Ulf Kristersson (M).
Waxaa sannadkii hore cirka isku shareeray waalidka iswiidhishka ah oo carruur xanuunsan guriga ku haya. Tirada maalmaha carruurta xanuunsan guriga lagu hayo korodhay cunuggiiba maalin nuskeed marka la barbardhigo sannadkii 2012. Sidaasna waxaa war-saxaafdeed ku soo saaray Hay’adda caymiska bulshada. Hay’adda caymiska bulshadu waxay kororkaas saayidka ah sabab uga dhigtay xanuunada fiirusku keeno oo dad badan asiibay iyo in ay aabbayaasha carruurta xanuunsan fasaxa u qaata ay u fududaatay in ay codsadaan gunnada lagu qaato. Waxaa kaloo meesha laga saaray warqaddii caddeyneysey in carruur xanuunsan guriga lagu hayo, taas oo sahashey in la soo gudbiyo codsiyo.
Waxay ahayd dayrtii sannadkii hore kolkii uu wasiirka miisaaniyaddu Anders Borg (M) ugu deeqay 6 bilyan oo karoon oo dheeraad ah si loogu kabo kharashyada lacagaha bukaanka ee la filayo sannadkaan.